တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ SMIC သည် စတုတ္ထ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၅၃. ၈% တိုးတက် ခဲ့သည် - Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ SMIC သည် စတုတ္ထ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၅၃. ၈% တိုးတက် ခဲ့သည်
Feb 11, 2022, 12:21ညနေ 2022/02/11 14:11:21 Pandaily
ကြာသပတေးနေ့တရုတ် ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ Semiconductor Manufacturing International (SMIC၎င်း ၏နောက်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကုမၸဏီ၏ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စတုတၳ သံုးလ ပတ္ ၀င္ေငြ သည္ ယြမ္ ၁၀ ဒသမ ၂၆ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၂ ဘီလ်ံ) ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၅၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ကာ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ ခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း မ်ားအရ သိရသည္။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စုစုပေါင်း အမြတ် သည်ယွမ် ၃. ၃ ၅၂ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၃၄. ၁% တိုးလာပြီး စုစုပေါင်း အမြတ် မှာ ၃၂. ၇% ဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ် ၂၁. ၅% ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် SMIC ၏လည်ပတ်မှု အမြတ် သည်ယွမ် ၄. ၀ ၉၂ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၄၈. ၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ၏ အမြတ် မှာယွမ် ၃. ၄ ၁၄ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁ ၇၂. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဤ အဓိက တိုးတက် မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီက ရှင်းပြ သည်မှာ တစ်ဖက် တွင် တိုးတက်မှု သည်အဓိကအားဖြင့် wafer ရောင်းအား တိုး ခြင်း၊ ထုတ်ကုန် အစုစု ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပျမ်းမျှ ရောင်းအား တိုး ခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက် တွင်, ထို ကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖက်စပ် နှင့် ဘဏ္ assets ာရေး ပိုင်ဆိုင် မှုအပေါ် ပြန်လာ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် SMIC သည် ယခု ပင် ဖြစ်သည်Shenzhen, Pingshan ခရိုင်တွင် အိမ်ခြံမြေ အသစ် ဝယ် ခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ လက ယွမ် ၁. ၀ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၁၂ လက်မ wafers များအတွက် မူရင်း ပစ္စည်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်မှု (OEM) စက်ရုံ တည်ဆောက် ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ် နှစ်လုံး အတွက် ဘဏ္ situation ာရေး အခြေအနေ ကိုလည်း ကုမ္ပဏီက ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စာရင်း မသ ွင်း ထားသော ၀ င်ငွေသည် ယွမ် ၃၅. ၆ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စာရင်း မသ ွင်း ထားသော ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ၏အ မြတ် မှာယွမ် ၁၀. ၇ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချစ်ပ် ပြတ်လပ် မှုနှင့် ဒေသတွင်း နှင့် ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၀ ယ်လိုအား မြင့်မား ခြင်းတို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီ အတွက် ရှားပါး သော အခွင့်အလမ်း များရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။ယူအက်စ် အစိုးရ၏ “အဖွဲ့အစည်း များစာရင်း”ကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အတားအဆီး များစွာရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:SMIC တည်ထောင်သူ Zhang Rujing နှင့် Wanye Enterprise တို့သည် Jiaxin Semiconductor ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၀ င်ငွေသည် သုံးလ တစ်ကြိမ် ၁၅% မှ ၁၇% အထိတိုးလာ မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အမြတ်အစွန်း မှာ ၃၆% မှ ၃၈% ကြား တွင်ရှိသည်။ အရင်းအနှီး အသုံးစရိတ် များ ကိုဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ ခန့် ခန့်မှန်း ထားပြီး တိုးမြှင့် နိုင်သည့် စွမ်းရည်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ထက်ပိုမိုမြင့်မား မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။